Otú iwu EPUB eBooks na Wondershare MePub?
Wondershare MePub Pụrụ inyere gị aka ngwa ngwa-ewu gị onwe gị EPUB ebook si 10+ ewu ewu formats: PDF (.pdf), MS Okwu (.doc / .docx), Text (.txt), HTML (.HTML / .htm / .xhtml), CHM (.chm), Images (.jpg / .png / .bmp / ​​.gif / .tiff) na na. N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ maka otú ike EPUB on Wondershare MePub.
Nzọụkwụ 1. Launch Wondershare MePub ma jupụta na akwụkwọ Ama
Abụọ-pịa Ndenye Malite na akara ngosi na desktọọpụ ẹkedori MePub. Na mgbe ahụ jupụta n'akwụkwọ Ama: aha, na-ede akwụkwọ, ụbọchị, asụsụ, isiokwu, nchọpụta, nkwusa, na nkọwa.
Rịba ama: Ọ bụrụ na gị ebook na-na e deghị English (ndabere nhọrọ), biko họrọ nri asụsụ na Book Ama mkparịta ụka igbe.
I nwekwara ike ịtọ okirikiri nhọrọ ukwuu na mmepụta nchekwa maka mmepụta ebook site na ịpị okirikiri nhọrọ ukwuu na mmepụta ntọala na n'aka ekpe. Mgbe ị gụsịa iwebata, pịa OK bọtịnụ ịzọpụta Ama.
Nzọụkwụ 2. Tinye a akwụkwọ cover
Abụọ-pịa ekpe cover ebe bulite a Obodo oyiyi dị ka gị akwụkwọ ọhụrụ cover.
Nzọụkwụ 3. Add akwụkwọ ọdịnaya
Pịa Tinye ọdịnaya button ịgbakwunye faịlụ. Ihe karịrị 10 iche iche nke akwụkwọ na-akwado, gụnyere PDF (.pdf), MS Okwu (.doc / .docx), TXT (.txt), HTML (.HTML / .htm / .xhtml), Chm (.chm), na Images (.jpg / .png / .bmp / ​​.gif / .tiff)).
Nzọụkwụ 4. Hazie tebụl nke ọdịnaya
Right-Pịa na ihe dị faịlụ, ị nwere ike wepụ ya ma ọ bụ ịkpali ya elu na ala.
I nwekwara ike nyegharịa dị ọdịnaya site na ịpị faịlụ aha gosiri na ndepụta.
Rịba ama: Ọ bụrụ na dị PDF faịlụ a na-echebe site oghere, i kwesịrị pịa mkpọchi ịbanye nri paswọọdụ Ị kpọghee ekwt ya.
Nzọụkwụ 5. Mee a akwụkwọ
Pịa Mee button ike gị EPUB eBooks. Na sekọnd ole na ole, ọ na-eme. Jụụ, nri? Gbalịa Wondershare MePub ike EPUB eBooks ugbu a.